Chopbox dia takelaka fanapahana 5in1 marani-tsaina, hanampy anao ve ianao? [Fanadihadiana] | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 23/10/2021 10:00 | General, hevitra
Ny teknolojia dia miaraka amintsika hatrany hatrany amin'ny lafin-javatra maro amin'ny andavanandrontsika isan'andro, na izany aza, ny fitomboany sy ny fampiharana vaovao dia mahatonga antsika hahita an'izany na dia amin'ireo toerana izay tsy noeritreretinay akory aza, ary izany no mitondra antsika ankehitriny.
Chopbox dia takelaka fanapahana marani-tsaina miaraka amina asa dimy izay tsy fantatrao fa ilainao. Tsy isalasalana fa hitanay fa vokatra mahaliana izaitsizy izany ary tsy afaka nanalavitra ny famakafakana azy izahay. Raha te-hanao dingan-dàlana mihoatra ny nentin-drazana ao an-dakozia ianao dia tsy hadinonao ny fandinihana izay nataontsika avy tao amin'ny Chopbox izay entinay anio, hendry ve ianao sa misakafo ara-tsakafo?
1 Fitaovana sy famolavolana: ekolojika sy tantera-drano
2 Fitaovana dimy ao anaty iray
3 Hevitry ny Editor
Fitaovana sy famolavolana: ekolojika sy tantera-drano
Raha tsorina, ity Chopbox ity dia mety hitovy amin'ny takelaka fanapahana volotsangana, toy ilay azonao vidiana ao amin'ny IKEA na amin'ny toerana hafa amidy. Mahita vokatra misy habe 454.6 x 279.4 x 30.5 mm lehibe izahay, araka ny eritreritrareo azy hanao takelaka fanapahana miovaova be izy io. 2,7 kilao ny lanjany manontolo, anaovana manontolo ao volotsangana zato isan-jato. Ireto takelaka volotsangana ireto, izay no ampiasaiko isan'andro, dia ekolojika ary tsy mila fikojakojana firy, satria tsy mandray rano na misy fiantraikany amin'ny hamandoana.
Manana kely izy io lalan-kely eo amin'ny sisiny izay manampy antsika manangona ny "ranom-boankazo" Amin'ireo legioma na voankazo novonoinay ireo, eny, manome marika ny marika fa azo soloina avokoa na ny ambonin'ny vata fanetezana na ny antsy, raha toa ka miharatsy tanteraka amin'ny fampiasana izany.
Na eo aza ny fananana singa elektronika, ny latabatra dia manana fanamarinana IPX7 manohitra ny rano, Ka tantera-drano tanteraka izy io, eny, mampahatsiahy antsika izy ireo fa tsy ho afaka alentika ao anaty rano izy na hametrahana azy ao anaty vilia fanasana lovia, zavatra izay tsy atolotra amin'ny karazana latabatra volotsangana, na "mahay" na tsia.
Etsy ankilany, ny latabatra dia azo zahana ho faritra roa, ny iray generika, ary ny latabatra apetraka amin'ny faritra ambany azontsika esorina, amin'izany fomba izany no hanapahantsika ny hena sy ny trondro misaraka, ka hisorohana ny be fahalotoan'ny hazo fijaliana mahatsiravina. Noheveriko fa hevitra tsara ny mampiditra latabatra fanampiny izay hampiasaina hanapaka, hanangonana fako na izay tiantsika.
Fitaovana dimy ao anaty iray
Efa niresaka momba ny "chopping board" nentim-paharazana mifandraika amin'ny tapa-kazo, Fa ny mety hahatonga antsika handany vola manodidina ny zato euro amin'ny vokatra toy izao dia manana fiasa fanampiny fanampiny hafa. Andao hiresaka momba ny sasany amin'izy ireo:
Jiro UV hamono otrikaretina: Amin'ny fametrahana ny latabatra ambany any ambony dia afaka mampandeha hazavana Ultraviolet 254 nanometer izay afaka mamono 99% ny mikraoba sy bakteria. Izy io dia hanompo antsika roa hamono ny latabatra, ary hampiditra antsy na fitaovana amin'ny lavaka amin'ny sisiny. Ny jiro dia ahetsika ary tapaka ho azy ary ao anatin'ny iray minitra dia ho vitantsika tsara ny famongorana azy.
Mizana namboarina: Fitaovana fototra iray hafa, satria manapaka isika ary manamboatra ny sakafony lehibe, izay tsy azontsika hadino dia ny refy. Amin'ity tranga ity, amin'ny alàlan'ny famindrana ireo singa miankavia fotsiny dia afaka mandanjalanja ho azy ny sakafo miaraka amin'ny 3 kg farafahakeliny ianao .. Azonao atao ny misafidy ny haben'ny fandrefesana ao amin'ny tontonana fanaraha-maso azy ary koa ny fiasa "mandreraka" ka ny lanjan'ireo fitoerana tsy raisina.
Famerenana nomerika: Eo ambanin'ny lanjany fotsiny, eo amin'ny tontonana fanaraha-maso, dia manana lahasa voafaritra miaraka amin'ny famataran'ora iray izay manararaotra ny tontonana LED hanome antsika elanelam-potoana mihoatra ny 9 ora isika noho ny famataran'ora nomerika izay mamaly mora ny mikasika.
Mp maranitra maranitra: Ary farany, satria hanapaka isika, ny tena anton'izany dia ny fanavaozana ny antsy, ary amin'izany dia manana antsy maranitra roa izy, ny iray vita amin'ny seramika ary ny iray amin'ny vato diamondra hahafahantsika mampiasa azy amin'ny antsy isan-karazany. .
Ity latabatra ity Chopbox dia mampiasa batterie 3.000 mAh izay voampanga amin'ny alàlan'ny tariby microUSB. Tsy azoko tsara hoe nahoana izy ireo no miloka aminy microUSB ny fahalalana fa USB-C no fenitra ankehitriny. Amin'ny lafiny iray, ity bateria ity dia manome antoka antsika hatramin'ny 30 andro hampiasana azy, tsy afaka nandany azy tamin'ny andrana izahay, noho izany tsy afaka nanamarina ny ora fiampangana anay, izay tombananay ho manodidina ny adiny iray sy sasany .
Izy io dia takelaka fanapahana marani-tsaina, eny, na ny mariky ny fanapahana teknolojia indrindra azonao eritreretina, ary noho izany antony izany dia manana vidiny eo akaikin'ny € 100 izy (€ 99,00 amin'ny powerplanetonline). Mazava fa mahaliana ny fiasa misy azy ireo ary afaka manatsara ny fiainantsika izy ireo, saingy vokatra caprice ity izay manome lanja lehibe indrindra fa raha tia minimalism isika dia mamonjy fitaovana efatra ao an-dakozia, zavatra iray amin'ny fotoana fa mihazakazaka izy ireo dia ankasitrahana.
Navoaka tamin'ny: 23 Oktobra amin'ny 2021
Fanovana farany: 17 Oktobra amin'ny 2021
Mitsitsia toerana sy fitaovana
Avo ny vidiny
Manana fihodinana ianarana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Chopbox dia takelaka fanapahana 5in1 marani-tsaina, hanampy anao ve ianao? [Fanadihadiana]